China ETP60 tube na tube mpempe akwụkwọ welded head factory na ndị na -eweta ya. AEON
TP060 bụ isi weld kachasị na tube n'ime oghere ịgbado ọkụ mpempe akwụkwọ. Ọ nwere ike mezuo ihe karịrị 90% nke tube na -apụtakarị na njikọ ọkpọ na eriri na -arụ ọrụ na ọrụ AVC. Oghere kwesịrị ekwesị OD nke TP060 sitere na φ16mm -φ60mm, yana TP060A (yana obere mgbanwe site na TP060) nwere oke φ89mm.
Ụdị abụọ nke isi weld na -ejigide bụ nhọrọ: TPF03 manioulator ma ọ bụ ihe na -ewuli elu. Collet nọ n'ọnọdụ dị iche maka ụdị njigide ọ bụla - achọrọ ọnọdụ idobe ihe mgbe ị na -eji TPF03 manipulator yana mkpa ịgbasawanye mgbe ị na -eji ihe nrịgo ziri ezi.
φ 16mm - φ60mm (nwere ike ịgbatị ruo φ89mm) tube OD nso;
Ọrụ nri waya nwere ike mezuo ọtụtụ ihe ịgbado ọkụ chọrọ;
Ọrụ AVC dị, belata nsogbu ọrụ;
Ọkụ TIG na-ajụ mmiri mmiri, dị mfe iji dochie akụkụ ọkụ;
Bọtịnụ njikwa na aka isi weld, adaba iji rụọ ọrụ;
Usoro mmiri jụrụ oyi nke ọma, okirikiri ọrụ dị elu maka iji ogologo oge mee ihe;
Mkpuchi mkpuchi mkpuchi mkpuchi nhọrọ, dị maka ịgbado ọkụ ihe pụrụ iche dị ka alloy Titanium.
Isi ịgbado ọkụ a bụ isi ịgbado ọkụ TIG pụrụ iche maka tube/tube-mpempe akwụkwọ nke a na-eji maka nchara carbon na igwe anaghị agba nchara. Ngwa na esi mmiri ọkụ, onye na -ere ọkụ, ọkụ eletrik, ụlọ ọrụ kemịkalụ wdg. Mpaghara dayameta dị φ16 φ φ89mm. Dochie akụkụ ndị kwekọrọ ma ọ bụrụ na oke dayameta dị φ60 φ φ89mm. Dabere na teknụzụ ịgbado ọkụ, nwere ike iji ịgbado ọkụ, ịgbado ọkụ na ihe nzacha waya ma ọ bụ eriri nri mgbe njikọta ịgbado ọkụ, ọrụ ahụ dị mfe.
Isi ịgbado ọkụ a na iOrbital4000 ma ọ bụ iOrbital5000 orbital ịgbanye ọkụ na-etolite sistemu ịgbado ọkụ akpaka nke ga-amata ịgbanye ọkụ/tube-mpempe akwụkwọ orbital TIG ma na-ekwe nkwa mmetụta ịgbado ọkụ dị mma.
φ 16 - φ 60 (φ89 agbatị)
Carbon steel / igwe anaghị agba nchara / titanium alloy
Protruding / flushed / recessive (-1mm max.)
0 ° - 30 ° mgbanwe
Nke gara aga: Ike ịgbado ọkụ iOrbital5000
Osote: TP040 tube na tube mpempe akwụkwọ weld isi
Ike ịgbado ọkụ iOrbital4000
TP040 tube na tube mpempe akwụkwọ weld isi
T8 tube to tube mpempe akwụkwọ weld isi